Isifundo se-Anaconda: IPython yokufunda uMatshini kunye neNzululwazi yeDatha- Ikkaro
yokuqalisa >> software >> Linux >> Isifundo se-Anaconda: Yintoni, uyifaka njani kwaye uyisebenzisa njani
Isifundo se-Anaconda: Yintoni, uyifaka njani kwaye uyisebenzisa njani
Kule nqaku ndishiya ifayile ye- Isikhokelo sokufakwa kwe-Anaconda kunye nendlela yokusebenzisa umphathi wephakheji yeConda. Ngale nto sinokwenza indawo yophuhliso lwe-python kunye ne-R ngeelayibrari esifunayo. Ndinomdla kakhulu ukuqala ukungxama ngokuFunda ngomatshini, uhlalutyo lwedatha kunye neprogram yePython.
I-Anaconda yindawo yasimahla kunye neVulekileyo yokuhanjiswa kolwimi lwePython kunye neelwimi ezisetyenziswa kakhulu kwi ikhompyuter yenzululwazi (iSayensi yeDatha, iNzululwazi yeDatha, ukuFunda ngomatshini, iSayensi, ubuNjineli, i-analytics yokuqikelela, idatha enkulu, njl..
Ifaka inani elikhulu lezicelo ezisetyenziswa ngokubanzi kwezi nkalo ngaxeshanye, endaweni yokuba uzifake nganye nganye. . Ngaphezulu kwe-1400 kwaye zezona zisetyenziswa kakhulu kwezi nkalo. Eminye imizekelo
Ngexesha elidlulileyo ndifakile Iikhamera kunye neTensorFlow bareback kodwa isisombululo sika-Anaconda sibonakala silula kwaye siluncedo ngakumbi
Ikwayi- ukhetho oluhle lokufaka iPython kwinkqubo yethu yokusebenza kunye neelayibrari esizifunayo kwaye sizihlukanisile iiprojekthi kwiindawo ezahlukeneyo ezibonakalayo.
Ndivavanya ngokukodwa ezinye zezikripthi zokulawula i-csv enkulu yomsebenzi kwaye endifuna iNumPy kunye nePandas. Kwaye ngoku ndizakuzama iTensorflow kunye nenye into ;-)
Into endiyibonayo ngenani leephakeji endizibonayo kukuba ayikhawulelwanga kuhlalutyo lwedatha kuba sinokufaka amakhulu eeplagi (iilayibrari) ezinikezelwe kuphuhliso lwewebhu okanye ukukrwela njengeScrappy. Ke sihamba kunye nofundiso ngokubanzi lofakelo kunye nokwenziwa kweemeko kwaye siya kuphanda usetyenziso esinokulufaka.
UAnaconda vs uConda
Icandelwana. Musa ukudida I-Anaconda, esisuti esivumela ukuba sisebenzise amathala eencwadi amaninzi kunye nohlalutyo lwedatha, iSayensi yeDatha kunye nesoftware yokufunda ngoomatshini kunye noConda, ongumphathi wepakeji yeAnaconda. kunye neemeko ezibonakalayo.
Uyifaka njani i-Anaconda kwi-Ubuntu
I-Anaconda inokufakwa kwiMicrosoft, MacOs nakwiLinux. Ndiza kukuxelela ngamava am ku-Ubuntu.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokufaka i-Anaconda ku-Ubuntu, eyona ndiyithandayo kukuya kwiwebhusayithi esemthethweni kwaye khuphela .sh. Fumana inkqubo yakho yokusebenza kunye nohlobo olunomdla kuwe
Ukuba uqala ndicebisa ukuba ukhethe uguqulelo 3.7 lokuba u-2.7 azakuphelelwa lixesha kwiminyaka embalwa.
Ukuba ukhuphela i-.sh ye-linux njengam, kuya kufuneka uvule ikhonsoli okanye i-terminal, kwaye uye kulawulo apho ikhoyo, kwimeko yam Ukulanda
Khumbula ukuba eyona mpazamo ixhaphakileyo banayo abantu kukuba ayingeni kwifolda okanye isikhombisi esichanekileyo
Ngomgca wokuqala siya kwisikhombisi sokukhuphela, kunye nesibini «ls» Uluhlu lweefayile ezikhoyo kwaye ke sinokubona igama le- .sh kunye neyesithathu sisebenzisa i-.sh esithi siyifana Iwindows .exe.
Kwaye iya kuqala ukusebenza. Yamkela imigaqo yelayisensi yesoftware kwaye iya kukubuza ukuba uyafuna ukufaka iKhowudi yeKhowudi yeVenkile. Ndithe ewe.
Amanyathelo emva kokufaka iAnaconda
Kuya kufuneka uphume kuloo ntengiso yesiphelo ukuze utshintshe ukusebenza. Ke sivale isiphelo sendlela, siphinde sivule kwaye sichwetheze
Oku kuyakuvula ujongano lomzobo kunye nefomathi yesikhangeli eya kusivumela ukuba sifake kwaye sisebenzise iiphakeji ezahlukeneyo, nangona sinokwenza yonke into ukusuka kwikhonsoli.
Nje ukuba sifakwe siya kujonga ukuba yonke into ichanekile. ngenxa yoko siza kubona ukuba loluphi uhlobo esilufakileyo
Ukuba konke kulungile kuya kusibuyisela phezulu njenge I-conda 4.6.4 Ukuba impazamo iyavela, kuya kufuneka sibone ukuba isixelela ntoni ukusombulula, ukuyifaka kwakhona, njl.
Ukuba ufakele nje kuya kufuneka ubone ukuba akukho hlaziyo kwi-conda
Oku kuthelekisa ingxelo esinayo naleyo ikhoyo kwaye ukuba kukho into entsha eza kusibuza
Sibeka «kunye» ewe kwaye singene
Yenza imeko yokusebenza ebonakalayo ngeConda
Iprojekthi nganye esiyenzayo sinokuba nayo kwindawo eyahlukileyo, ngale ndlela siziphepha iingxaki ngokuxhomekeka kwiphakheji, njl.
Ukwenza imeko ebonakalayo, siza kuyibiza uthelekiso sibhala kwisiphelo sendlela:
conda create --name comparador python=3.7
Phi uthelekiso ligama lendalo ebonakalayo kunye python = 3.7 yiphakheji esiyifunayo ukuba siyifake.
conda activate comparador
Kwaye sisebenza nge
Siqinisekisa iimeko ezikhoyo
Oku kuyakusibonisa imeko-bume esinayo, iya kubuyisa into efana nayo
base                  *  /home/nacho/anaconda3
isiseko yingcambu, kwaye i-asterisk isibonisa leyo siyisebenzisileyo.
Inye into ekufuneka uyiqaphele. Xa usebenze imeko kwikhonsoli, igama liza kuqala kubazali ngokukhawuleza, ukuze ngamaxesha onke sazi apho sikhona
Imiyalelo enomdla ngakumbi:
sinokukhangela usetyenziso lokufaka. Khawufane ucinge ukuba ndifuna ukufaka iiKeras, kuba kuqala ndijonga ukuba ngaba isicelo sikhona na kwaye zeziphi iinguqulelo ezikhoyo
conda search keras
Njengoko ndibona ukuba sele inyathelo ukuyifaka
Kwaye ukubona yonke into esiyifakileyo kwindawo yethu yophuhliso siya kuyisebenzisa
Bamba iipakeji ze-pkgs nge-conda
Nazi iindlela ezimbalwa ezinomdla. Oko kuyakusinceda ukuba siqwalasele imeko-bume yendawo yethu kunye nezicelo esizifunayo.
Kukho imiyalelo ekhethekileyo. Ukufakela iphakheji kwimeko ethile. Umzekelo uKeras, kwindawo yam entsha uthelekiso
conda install --name comparador keras
Ukuba asidibanisi-igama elithelekisa liya kuyifaka kwimeko-bume esisebenza kuyo ngalo mzuzu.
Singafaka iipakeji ezininzi ngaxeshanye (iikhamera kunye ne-scrappy) nge
conda install keras scrappy
Kodwa ayikhuthazwa into yokuba kuthintelwe iingxaki zokuxhomekeka.
Okokugqibela, sinokukhetha uhlobo oluthile esifuna ukulifaka ukuba sinomdla kuso nasiphi na isizathu
conda install keras=2.2.4
Faka iiphakheji ezingezizo ezikaConda
Kule meko siza kusebenzisa umbhobho
Kukho iindlela ezahlukeneyo. Hlaziya iphakheji ethile nge
conda update keras
Ukuhlaziya yonke ipakethi yemeta yeAnaconda
Cima iipakeji kwindawo enikiweyo. Umzekelo iiKera ezivela kwindalo esingqongileyo uthelekiso
conda remove -n comparador keras
Ukuba sifuna ukusula indawo esihlala kuyo
conda remove keras
Iiphakheji ezininzi zinokususwa ngaxeshanye
conda remove keras scrappy
Kuyacetyiswa ukuba ujonge iipakeji ukuze ubone ukuba ikhutshiwe ngokuchanekileyo
Kum oku ziziseko, ukuba ufuna ukungena nzulu apha unayo incwadi esisemthethweni yeekhondomu (ngesiNgesi)
Sishiye i Ukukopela iphepha nguConda igosa, kunye nemiyalelo ephambili yokusebenzisa ngokukhawuleza ukuhambisa.
Ukuhamba kwindawo ebonakalayo yeAnaconda
Konke oku sikwenza nesiphelo kwaye sinokukwenza ngokuzoba kunye nomdibaniso weAnaconda.
Ukuqala ukuhambisa kuqala kuya kufuneka ukuba sibe nendawo esisiseko (ingcambu) conda esebenzayo
Ngale nto sinokubiza uAnaconda. Ukuba akunjalo, ayizukuqala
Uyabona, apha sifumana iprojekthi esisiseko, eyingcambu kunye nemeko-bume oyenzayo kwaye kwimeko yam ibiyiyo uthelekiso.
Kungcono ukuyibona kwividiyo
Ngolwazi olufunyenwe kwinqaku lonke sinokuqalisa ukudibanisa kunye nokudibanisa iilayibrari ezininzi kunye nokusetyenziswa.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, shiya uluvo kwaye ndiza kuzama ukukunceda
Iikhosi zokufunda uMatshini wokuFunda, ukuFunda okunzulu ...
Google Colaboratory okanye Google Colab
Ikhosi yokuKhubazeka yokufunda
Ziqhutywa njani iifayile ze.py
Incwadana yokubhalela kaJupyter. Iprojekthi yeJupyter
Imibono ye-LEGO Boost yakho
Eyona F-Droid Apps
izigaba Linux, U kufunda, software Ukuhamba kwetikiti
Uyibona njani iphasiwedi efihliweyo ngamachaphaza okanye ii-asterisks
Ungaziguqula njani iitafile ukusuka kwi-PDF ukuya kwi-Excel okanye kwi-CSV ngeTabula
1 UAnaconda vs uConda
2 Uyifaka njani i-Anaconda kwi-Ubuntu
3 Amanyathelo emva kokufaka iAnaconda
4 Yenza imeko yokusebenza ebonakalayo ngeConda
5 Bamba iipakeji ze-pkgs nge-conda
5.1 Faka iipakeji
5.2 Faka iiphakheji ezingezizo ezikaConda
5.3 Hlaziya iiphakheji
5.4 Cima iiphakheji
6 Ukuhamba kwindawo ebonakalayo yeAnaconda